Fumanisa izibonelelo zomkhwa wokuhamba | IBezzia
Susana Garcia | 08/06/2021 20:00 | Ukuzivocavoca, ZeMpilo
El umkhwa wokuhamba yenye yezona zinto zisisiseko xa kusenziwa umthambo yonke imihla kwaye iyafumaneka kuye wonke umntu. Kubonakala ngathi ngumthambo olula kodwa kusizisela iinzuzo ezinkulu esinokuthi singaziboni. Ukuba ufuna ukufumana imilo ngaphandle kokuzilolonga okanye uqeqesho olunzima, ungazibandakanya kwezona zisisiseko kwezemidlalo, umkhwa wokuhamba.
Ukuhamba kunjalo into phantse wonke umntu anokuyenza mihla le, ke ngumdlalo ongenazizathu. Inezibonelelo ezininzi ezenza ukuba sikhethe njengomnye wemidlalo ebalaseleyo kuye wonke umntu. Ukongeza, inokwenziwa nokuba asinayo imvelaphi enkulu yezemidlalo, ke inokuba ngumdlalo olungileyo ukuqala ngawo.
1 Izinto eziluncedo zokuhamba
2 Inceda ukugcina ubunzima
3 Iyanciphisa uxinzelelo
4 Ukhusela amalungu
5 Indlela yokwenza umkhwa omtsha
Izinto eziluncedo zokuhamba
Ukuhamba ngumkhwa olula kakhulu onokuphantse wenziwe ngumntu wonke. Enye yeenzuzo zayo ezilungileyo kukuba akukho nto ikhethekileyo iyimfuneko ukuyenza. Kuya kufuneka sikhethe iimpahla ezifanelekileyo kunye nezihlangu ezifanelekileyo. Izihlangu kule meko zezona zibaluleke kakhulu, kuba kufuneka zintofontofo kwaye zinokutshixwa, nangona kunganyanzelekanga ukuba zichaze ngokuthe ngqo kwimeko yezihlangu okanye kweminye imidlalo kuba ifuthe lincinci. Ukongeza, sinokuyenza yonke imihla kwaye ngokulula, ngaphandle kweendleko kuthi. Ngomnye wemidlalo esisiseko enokuthi yenziwe kwaye yiyo loo nto ngamanye amaxesha singayiqapheli, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ngumdlalo ekufuneka siwuqwalasele.
Inceda ukugcina ubunzima
Kubalulekile ukugcina ubunzima obunempilo kuba kubunzima bethu inezibonelelo ezininzi zempilo. Ukutyeba kubi, kodwa kukutyeba kakhulu, kuba oko kuza neengxaki ezinje ngokujikeleza kakubi, icholesterol okanye iingxaki zentliziyo Ukuhamba ngumdlalo osisiseko kodwa ukuba sikwenza imihla ngemihla, ngesantya esihle, sinako ukugcina ubunzima bethu ngokulula. Ngeentsuku apho ungafuni ukwenza umdlalo onamandla ngakumbi, hamba, kuba yenye indlela yokusebenza esebenzayo elula kakhulu.
Kulo Ubomi bemihla ngemihla sinexinzelelo oluninzi olungelulo, kuba eli lizwe emzimbeni wethu kufuneka lisebenze kuphela ngexesha elifanelekileyo kwaye ngoku sihlala kwimeko yoxinzelelo esisigxina, eneziphumo kumzimba wethu nakwinkqubo yethu yomzimba yokuzikhusela. Kungenxa yoko le nto ukunciphisa uxinzelelo kubalulekile. Ukuhamba yonke imihla kusinceda ukuba sehlise amanqanaba oxinzelelo kuba umthambo uvelisa ii-endorphins kwaye zisiphumze. Oku kwenza ukuba amajoni ethu omzimba omelele kuba awuchaphazeleki yi-cortisol, ihomoni esiyifihlayo kumanqanaba oxinzelelo.
Umkhwa woku ukuhamba kunceda ukukhusela amalungunjengoko yomeleza amadolo kunye nesinqe. Ukuzilolonga kukomeleza izihlunu namathambo, yiyo loo nto kuluncedo emzimbeni wethu. Ukuzilolonga ngokuphakathi kubalulekile kakhulu ukuze imizimba yethu ihlale ikhawuleza kwaye yomelele kuyo yonke iminyaka. Ukuthintela iingxaki zokudibana, izihlunu kunye nethambo kunokufezekiswa ngokwenza umthambo.
Indlela yokwenza umkhwa omtsha
Hamba imihla ngemihla inokuba yindlela elungileyo yokuhlala usempilweni. Umkhwa omtsha kufuneka wenziwe ubuncinci sisiqingatha seyure ngosuku ukuze ubone izibonelelo zawo. Kuya kufuneka uhambe ngesantya esifanelekileyo ukuze ufumane ezona zibonelelo zilungileyo, kuba ukuhamba ngesantya esihle kunyusa ukubetha kwentliziyo yakho kunye nomzamo owenzayo. Kuya kufuneka ufumane izihlangu ezifanelekileyo kwaye ujonge iindawo ezinomdla wokuhamba, uguqula iindlela. Singabandakanya ezinye ngamathambeka ukufumana ukusebenza ngakumbi ngokwenza umthambo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Izibonelelo zomkhwa wokuhamba
Izinto eziluncedo kuqeqesho lokunqunyanyiswa